Pepanhau rokuBritain rinonzi The Sunday Times rakabudisa ayo wepagore mazita vakapfuma vanhu munyika. Pakati zviuru rokutanga mupfumi ane, kuwana mamiriyoni ari kumbonyanya mudiki. Pakati pavo vane vatambi, vaimbi, masayendisiti, uyewo rombo, kuhwina rotari kana nhaka Zvaifadza mamiriro kuhama dzake.
Sergio Chirino: USD mamiriyoni 52
Muna 2011, Argentine Anouraya akabatana British Grand "Manchester City". Pasi chibvumirano ano, nhabvu mutambi anowana 200,000 mapaundi pavhiki, pasingaverengwi bonuses kuti akanganwa scored kukunda Tournaments siyana.
Niall Horan: USD mamiriyoni 52
Izvi Irish mukomana ane makore 23 okuberekwa ari nhengo yakakurumbira bhendi One Direction. Gore rapera akabudisa ake wokutanga Solo rwiyo, Niall Horan akaita zvakatowanda dzakakurumbira uye akapfuma.
Liam Payne: USD mamiriyoni 52
Chimwe ubatanidzwe kuBritain dzakakurumbira vakomana vanoungana Mumwe Direction Panewo ake Solo basa. Pashure nokusaina pamwe Capitol Records Liam Payne Akasunungura album wokutanga.
Garri Staylz: USD mamiriyoni 52
Kufanana maviri rapfuura mukwikwidzi Mumwe Direction, Styles havasi agere asina zvaaiita pedyo pashure veboka raMwari marambana. Ake Solo kuroorwa "Zviratidzo Time", rakabudiswa chitubu ichi, pazuva rokutanga zvikamu machati munyika dzinopfuura 80.
Louis Tomlinson: USD mamiriyoni 52
Pakanga zvagara pazvinhu izvi uye nhengo yechina One Direction. Muna December 2016, Louis akaita abudirire debut nerwiyo Solo.
Jack Cator: mamiriyoni 58,5 US madhora
Very guru mamiriro Katori-nemakore 28 akauya pamwe chete Avg anozivikanwa boka, izvo nemakore 16 Jack vakatanga-software inogonesa vanoshandisa yokunzvenga Internet filters.
Matt uye Cassie Tophemy: mamiriyoni 62,3 US madhora
Izvi Vaviri kubva Stapleford zvechokwadi anogona kunzi rombo. Akatenga muna 2012, rotari tikiti akavabudisa mubayiro nakisisa emakirogiramu mamiriyoni 45. Izvi zvisati zvaitika, Matt aishanda ari nyore Decorator, uye Cassie - a mushambadzi ari Supermarket.
Ed Sheeran: mamiriyoni 67,5 US madhora
muimbi-makore 26 atova nenguva refu ari pamusoro UK Music Hall Vakakurumbira. About kwayo kukurumbira ndechokuti mumwe nziyo dzake nokuti zuva auditioned zvinyorwa nhamba yevanhu - vanopfuura mamiriyoni 10.
Garet Beyl: $ mamiriyoni 70
Pashure kusaina chibvumirano chitsva Madrid "Real" muna 2016. Welsh footballer Ndakatanga kuita mari incredible. Nokuti mwaka mumwe chakaitirwa muImba Spanish nemakurukota, Garet Beyl anowana makirogiramu anopfuura mamiriyoni 18. Uye izvi kufungisisa mitero zvose.
Robert Pattinson: US $ miriyoni 87
Ake incredible fuma-makore 30 mutambi anotarisirwa shamisa Vampire the saga "Twilight". Ndicho basa Edward aiva springboard nokuda Hollywood basa Roberta Pattinsona. zvikamu Vashanu dzeboka firimu wakazviunganidza nhoroondo bhokisi hofisi $ 3,3 billion, uye mari iyi richikura. Kuwedzera kune kuita basa, Pattinson yakabudirira pamwe rakakurumbira Dior womuenzaniso sangano.
Endi Myurrey: $ mamiriyoni 100
Endi Myurrey akava mumwe akabudirira zvikuru mutambi munhoroondo Great Britain. Muna 2016 iye kuenda nyika chepamusoro ari shasha. Kuwedzera huru yechikoro kuti kukunda Tournaments dzakawanda, Murray ane purofiti akanaka tichiregeredza guru-zita Sponsors akadai Standard Life, Under Nadzo uye pasi Jaguar.
Deniel Redkliff: mamiriyoni 101,5 US madhora
upfumi hwake Hollywood nyeredzi vakatanga kuwana mwana kuti basa rake Harry Potter, izvo vakamuisa mukurumbira dzakawanda uye yaitikoka yakakurumbira directors. Panopera basa kinosage iri Radcliffe akazviratidzazve mumafirimu akawanda akadai "Victor Frankenstein" kana "Mukadzi mu Black."
Rory McIlroy: mamiriyoni 106,4 US madhora
Wokutanga kukunda shamisa pane nyanzvi gorofu mutambo mu Dubai McIlroy akahwina nemakore 19. Iye zvino 28 shure Rory akahwina makwikwi akawanda dzakawanda, uye yakakura mari uye multimillion kushambadzira zvibvumirano pamwe nemakambani akasiyana.
Adele: mamiriyoni 162,2 US madhora
Mumakore 29, Adele akava vakapfuma mukadzi muimbi munhoroondo Great Britain. izvi zvose akava zvichibvira nekuvongwa vanobudirira zvesimba rake rose. Zvinenge zvose nziyo dzake vaizokurumidza kuva Hits yose uye muuye dzakawanda varo zvikuru nomukurumbira mumhanzi mibayiro uye mibayiro.
Pollyanna Gredli: mamiriyoni 251,8 US madhora
Vazhinji mamiriro Pollyanna-makore 30 nhaka kubva baba vake, waiva rose umambo maberekero racehorses. Uyezve, iye ndiye mukuru wekambani mhuri Newmarket.
Thomas Meki mamiriyoni 592 US madhora
-Nemakore 29 multimillionaire aiva mamiriro akadaro nhaka kubva sekuru vake - muvambi CEF Holdings Electronics mugadziri. Panguva iyoyo, Thomas vakabudirira vakakwanisa bhizimisi mhuri yose apo nokuwedzera nepfuma yenyu.
India Rouz Dzheyms mamiriyoni 688 US madhora
musikana ane makore 25 okuberekwa uyewo nhaka yakakura pfuma kubva sekuru vake Paul Raymond, muridzi zvivako munzvimbo zhinji nomukurumbira nzvimbo London - Sohõ.
Lady Sharlotta Uelsli: US $ 5 billion
Muna 2016, mwanasikana-makore 26 ari Duke pakati Wellington akaroorwa weColombia-American billionaire Alejandra Santo Domingo. Pashure kubatanidzwa kwavo guru Handingambofungi chakaitika ezvinhu.
The Duke pamusoro Westminster uye mhuri Grosvenor: mabhiriyoni 12.35 US madhora
Pakafa Gerald Cavendish Grosvenor mwanakomana wake ane makore 26 okuberekwa, Hugh aiva Duke pamusoro Westminster wechinomwe. Vazhinji inoti vemhuri iyi revatongi zvakabatana munyika zhinji zvadzinazvo sezvo yechipiri yezana namanomwe remakore.
Designer - zvinobatsira basa? Ndinoziva sei zvakadini anowana nounyanzvi?
Nzira dzakawanda sei kuisa mari pamusoro kadhi "nemari"
The gotwe yeshoroma munyika
"Gazfond" (NPF) pamusoro profitability pamusoro wongororo
Sei Ndinoziva nengaidzo pamusoro kadhi PrivatBank, pasina kushandisa ATM
Sei kutora NAC zvikwereti? Features Matanho
River sherna rwizi, Noginsk dunhu. Kuredza Hove scerni
Smooth tsandanyama rinenge: haritorwi kuda murume
Zita makenduru kubva Mamota uye chikumbiro chavo
Shnurov Sergey: Biography uye upenyu pachavo pamusoro gakava muimbi
Enzanisa michina, zvinodiwa uye nokurondedzerwa
Chii chinonzi "birch porridge" zvinorevei?
How kudana kubva pahwendefa? Tips uye mazano!
Easel kupenda sezvo kwetsika nhaka nyika
Automaton yemwoyo wemunhu: tsanangudzo, tsanangudzo, node uye chidimbu
Vitamini B15: zuva nezuva, zvinoshanda. Mishonga ine vitamini B15 zvakagadzirwa
Gedeon Burkhard (biography, filmography, upenyu hwehupenyu)
Ice Palace "Sokolniki" mitambo: address, mapikicha